Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရယူခြင်းအပေါ် lowdown ။ အမျိုးသားကျန်းမာရေး Nick Knight, MD, PhD ။ (2019) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
မှတ်ချက်များ - အဖြစ်မှန်ကိုတန်ပြန်ဇာတ်ကြောင်းကို Justin Lehmiller ကပေးခဲ့သည်။ သူက ပုံမှန်ပေးဆောင်ပံ့ပိုးရန် Playboy မဂ္ဂဇင်း နှင့်အနီးကပ်မဟာမိတ် နီကိုးလ် Prause; RealYBOP ၏အသင်းဝင်YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့); နှင့် SHA ၏ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် - ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန် xHamster နှင့်အတူပူးပေါင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့.
လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း၎င်းကိုဖွင့်ရန်ရုန်းကန်နေရပါသလား ဒီနေရာမှာမင်းသိထားသင့်တာက (ဆောင်းပါးလင့်ခ်)
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်အခြားကျန်းမာသောအမျိုးသားများအကြားလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။ အသက် ၃၀ ခန့်ရှိသူတို့၏ထက်ဝက်ခန့်ကိုထိခိုက်စေပြီးဆေးဝါးအမြန်ပြုပြင်ခြင်းများတိုးပွားလာသည်။ သို့သော်အပြာရောင်ဆေးလုံးငယ်များသည် ပို၍ ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှခက်ခဲသောအမှန်တရားမှာပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်နေခြင်းလော။
ယခု 30, သူသည်တက္ကသိုလ်၌“ အတွင်းစိတ်ထိတ်လန့်မှု” ကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေသည့်မိန်းကလေးကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမသိခင်ကစိတ်ပူစရာမလိုတော့ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူဒီလိုပြောတယ် -“ ငါရုန်းကန်နေရတယ်လို့ထင်တယ်။ သူမသူမသူငယ်ချင်းကမြင်နေရသည့်ဤကောင်လေးသည်အချိန်တိုင်းတွင်ရှိနေသည်ဟုမည်သည့်နေရာမှမဆိုပြောပြသည်။ ပြီးတော့သူမကကျွန်တော့်ကိုရောဂါရှာဖွေခဲ့တယ်။ ဒါဟာကြားဖို့အကြွင်းမဲ့အာဏာအဆိုးဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူမကိုအများကြီးစိတ်ကူးယဉ်။ ငါထိတ်လန့်ရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ ထိုအခါငါတကယ်မတက်နိုင်ဘူး။ "
အဆိုပါ frisson ထွက် fizzled ။ သူတို့သည်လိင်မဆက်ဆံကြပါ၊ သူသည်သူမကိုနောက်တဖန်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်သဘောဖြင့်တစ်ခါမျှမတွေ့ခဲ့ပါ။ သူဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လောက်မှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ 2009 မှာရှိခဲ့တယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်သူ၏အမည်ရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသုံးရန်တောင်းဆိုခဲ့သောဂျွန်သည်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ “ ဒါကဆရာဝန်ကိုတကယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းဘာလို့လိုတာလဲ သူတို့ကမင်းကို Viagra ပေးလိမ့်မယ်။ ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူပြောချင်သနည်း။
ဘယ်သူလဲ။ ဒါပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဂျွန်ဟာလူစည်ကားတဲ့အခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာနေနေတဲ့လူတန်းစားထဲကတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ချိန်ကသက်ကြီးရွယ်အိုများရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) သည်အနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သုတေသီများက ED လူနာလေးယောက်တွင်တစ် ဦး သည်ယခု 40 အောက်တွင်ရှိနေသည်ဟု Co-Op ဆေးဝါးမှမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုအရစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော 2000 အမျိုးသားများအနက်အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိသူများ၏ထက်ဝက်သည်စိုက်ထူမှုရရှိရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲရှိကြသည် - သူတို့ရဲ့လေးဆယ်ငါးဆယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများအတွက်, ဒီနည်းနည်းသဘာဝကျပါတယ်။ အနှစ်တစ်ထောင်သည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊ အာဟာရပြည့်ဝစွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးသူတို့၏ဖခင်များထက်နှလုံးရောဂါခံစားနိုင်မှုနည်းပါးသည်။ သုံးဆယ့်သုံးရာသည်ပိုမိုများပြားစွာသောက်သည်၊ မသောက်တော့ဘဲများသောအားဖြင့်ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ ED ကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများစာရင်းရှိပါကဤမျိုးဆက်၏ပျမ်းမျှအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်အကွက်တိုင်းကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ဆရာဝန်များသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် ED ရောဂါခံစားနေရသောလူများကိုပင်ကြုံတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအမျိုးသားများမြင့်တက်လာခြင်းကိုမမြင်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကနှေးကွေးစေသနည်း။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Viagra သည်၎င်း၏ 20th မွေးနေ့ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ အပြာရောင်ဆေးလုံးလေးကို 1998 တွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုပြီးသောကြောင့်၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူ Pfizer ကိုအမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းတွင်ဒေါ်လာ 24bn ထက်ပိုသောပမာဏဖြစ်စေသည်။ Pfizer ၏ US မူပိုင်ခွင့်သည် 2020 တွင်သက်တမ်းကုန်သွားသော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီသည် ED စီးပွားရေးကိုပြောင်းလဲစေသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယေဘုယျနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ရောင်းချရန်သဘောတူညီချက်ကိုညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိုက်ထူ commodified ပါပြီ။
ယင်းတို့ကိုပထမဆုံးစွဲကိုင်နိုင်ခဲ့သူများထဲတွင်ယူအက်စ်ကုမ္ပဏီ၏စတင်တည်ထောင်သူဟိုင်မ် (Modist, shareable images and humour memes) များကိုရောင်းဝယ်ပြီး Viagra ရှိတက်ကြွစွာပါဝင်သည့်ဗီတာမင်မှ sildenafil ကိုရောင်းချသည်။ ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်သည်“ ငယ်ရွယ်သော” အော်ဟစ်။ သူတို့အားအော်ဟစ်သံများသည်နားကြားခြင်းသို့ရောက်သွားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 700m ထက် ပိုမို၍ တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ 1bn ဖြစ်သည်။
အလားတူအောင်မြင်မှုကိုလိုက်ဖမ်းသည်အခြားကုမ္ပဏီများသည်လိုက်ကြ၏။ Sildenafil (Viagra) ကိုဆေးညွှန်းမပါဘဲရရှိနိုင်စေရန်အတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာကုန်စည်များအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှယမန်နှစ်ကငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုအွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်းယူကေတွင် Viagra သည်ကောင်တာကိုကျော်။ အားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဗြိတိန်အခြေစိုက်အွန်လိုင်းအမျိုးသားဆေးဆိုင်၏အတော်များများကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူရီကာဒိုဘရွန်နီက“ ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကဒီဆေးတွေကိုရောင်းခဲ့တယ်။ လူငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွက်ရှင်းလင်းသောစျေးကွက်ရှိသည်။ ” စီးပွားရေးပုံစံနှင့်ငြင်းခုံရန်ခဲယဉ်းသည်။ အများစုတွင်ထူးခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့ရှိသည်။ ရစ်ချတ်ရိဒ်သည်ဖျော်ရည်ကုမ္ပဏီ Innocent Drinks ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာဝယ်ယူမှုသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမူးယစ်ဆေးဝါးများကို ၀ ယ်ရန်၊ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာများစွာသောဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူမှအကဲဖြတ်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စတင်တည်ထောင်သူအားလုံးတွင်အိမ်တွင်းဆေးဝါးမရှိသဖြင့်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏လွယ်ကူမှုကဝေဖန်မှုများကိုဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကဤဆေးဝါးများသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတားဆီးနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်နောက်ခံပြproblemsနာများကိုသေချာပေါက်မဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းသတိပေးသည် နောက်ဆုံးတွင် ED ကဲ့သို့သောပြofနာများသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည် - TGA ၏ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်း၏အကြောင်းအရင်းအတိအကျ။
တစ်ခုခုပျက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသိဖို့အသုံးဝင်ပါတယ်။ စိုက်ထူမှုသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထင်ရသော်လည်းနိုးကြားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်တူညီသည်။ - ၎င်းသည်ဓာတုဗေဒနှင့် ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်၏သဟဇာတအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုလိုအပ်သည့်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာလိင်တံ၏သွေးကိုထိန်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒီနေရာမှာပျက်ကွက်ဘုံဖြစ်ပြီး, ဒီတစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ခြင်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ထို့အပြင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြmetနာများဖြစ်သော ormetabolic syndrome ရောဂါနှင့်လည်းဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။ ပေါင်ခြံမှကိုယ်ခန္ဓာဒဏ်ရာ (သို့) အာရုံကြောချုံ့ခြင်း (စက်ဘီးစီးခြင်းအလွန်များပြားခြင်းကြောင့်) သည်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်နာကျင်နေတဲ့နေရာမှာလူငယ်တွေကပ်ရောဂါကူးစက်နေသလား။ GP နစ်ခ်နိုက်က“ ကျွန်တော့်မှာ 18 လိုငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ် - ကျွန်တော့်ငပဲပျက်သွားတယ်။ သူတို့မှာစိုက်ထူမှုမရရှိနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကစိုးရိမ်နေကြတယ်။ ဒါကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာနေတယ်။ ” ဒါပေမယ့် 10 ထဲကကိုးကြိမ်မှာတော့လူငယ်တစ် ဦး မှာ ED အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ကိုရှာဖွေခြင်းဟာမှားယွင်းတဲ့ရောဂါရှာဖွေရေးအပင်ကိုဟန့်တားနေခြင်းဖြစ်သည်။ “ သူတို့ရဲ့ penises တွေကမချိုးဘူး။ ၎င်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲနိုင်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အဲဒါနောက်တစ်ခုကပါ”
လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုသည် ED အားဟာသအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ၎င်းအတွက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစီးကရက်ဘူးများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာစောင်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာခံစားနေရသော“ ဝမ်းနည်းဖွယ်လူကိုသူ၏စိတ်ပျက်အားလျော့နေသောဇနီးဘေးတွင်သူ၏လက်ကိုကိုင်လျက်သူ၏ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းရန်” ကျွန်ုပ်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤပုံဖော်ချက်များကစိုက်ထူမှုတစ်ခုမအောင်မြင်ခြင်းသည်သင်အားလူတစ် ဦး ထက်နည်းစေသည်ဟုဆိုထားသည်။ သင်သည် 20-a-day ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အကြီးအကျယ်ဖျားနာခြင်းရှိမရှိ - သို့မဟုတ်စိုးရိမ်သောလူငယ်တစ် ဦး မျှသာဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြသည်။
ED မြင့်တက်လာခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏ယုံကြည်ချက်ကိုသင်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်ပြdoubနာနှစ်ဆဖြစ်သည်။ နိုက်တ်က“ လူငယ်တွေမှာစိတ်ကျန်းမာရေးပြissuesနာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်လို့မရဘူး။ သူက“ ED နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းစိတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်လိုက်တာ။ "ငါသည်နံပါတ်မြင့်မားသောအလောင်းအစားလိမ့်မယ်။ "
အကယ်၍ စာအုပ်များသည်ဆေးခန်းများကိုကြည့်ရှုမည်ဆိုပါကနိုက်တ်အားမကောင်းသောအရာများပေးလိမ့်မည်။ “ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများများများစားစားတိုးများလာနေတယ်ဆိုတာသေချာတယ်” ဟုဒီနယ်ပယ်မှအထူးပြုတိုင်ပင်မှူ Kate Moyle ကပြောကြားသည်။ လူငယ်များသည်အကြံဥာဏ်တောင်းသူများ၏အများစုကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ Erectile disfunction နှင့်လျင်မြန်စွာသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်အတူမြင့်မားသောလူ ဦး ရေမှာရုန်းကန်နေရသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။
ဒါအရေးကြီးတယ် သင်၏ psyche သည်သင်၏လိင်တံကို marionette ကြိုးဖြင့်ကိုင်ထားသည်။ သင်အလွန်အကျွံဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လူသတ်မှုဖြစ်သည်။ “ ငါတွေ့တဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာအများကြီးရှိနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိတယ်။ လိင်သည်ပျော်စရာကောင်းရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရန်အောက်မေ့မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ သို့သော်ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက် - နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမျိုးဆက်သစ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှု၏ Instagramification - သည်မကြာခဏပင်ဇုန်အတွင်းသို့အာရုံရောက်သွားနိုင်သည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆက်သွယ်မှုကကျွန်တော့်ကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ "သင်ရုံဆေးကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Priligy ကိုအချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်ဆေးကိုရောင်းကြသည်။ ၎င်းသည် serotonin ကိုထိန်းညှိပေးပြီး၎င်းသည်မညီမျှမှုဖြစ်သည့်အခါသင့်အားလျင်မြန်စွာလာစေနိုင်သည်။ ဒါကမင်းရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့လိင်အကြားဆက်နွှယ်မှုအကြောင်းကိုမင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖော်ပြပေးတယ်။ ”
ဒါဆိုငါတို့ဘာမပျော်တာလဲ "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသံဖြူအပေါ်ကပြောပါတယ်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ မကောင်းတဲ့အပြုအမူကိုကြောက်တာပါ။ တာရှည်တာမလုံလောက်ဘူး၊ မလွယ်ဘူး၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကငါတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမဟုတ်ဘူး။
ရှေးပဝေအချိန်ကတည်းကပင်ကျော်တက်ခဲ့ရသည်။ ပြtheနာရဲ့ရင်းမြစ်ကိုသိဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲလို့မေးနေကြတယ်။ ဂူးဂဲလ်အတွက်နှစ်မိနစ်နှင့်သီအိုရီတစ်ခုသည်နံနက်ခင်း၏ဂုဏ်အသရေကဲ့သို့မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီ Ultimate
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအွန်လိုင်းပြန့်ပွားလာကတည်းကလိင်မှုကိစ္စသည်စုဝေးမှုဖြစ်လာပြီး၊ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များစုပေါင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုစုပေါင်းစိတ်ကူးဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုယခင်ကထက်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားလာသည်။ လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆေးခန်းတစ်ခုတွင်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုကိုကုသရန်ကြိုးစားသူများအတွက် 100 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူအများစုက၎င်းကိုနှစ်တစ်ထောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
နိုက်တ်က“ porn သည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုအလွန်အမင်းစိတ်ပျက်အားလျော့စေသည်။ “ တချို့ယောက်ျားတွေကလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာနဲ့မတူကြဘူး။ လူနာများကို 'မင်းဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်နေတာလဲ' ဟုမကြာခဏပြောတတ်သည်။ ပြီးတော့ 'ဒါကအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ထင်လား' '
၎င်းသည်သူ၏လိင်မှုကိစ္စကိုရေရှည်ဆက်ဆံရေးပြိုကွဲစေသည်ဟုယုံကြည်သောသူ၏အမည်ရင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ကီဗင်အပေါ်တွင်လည်းအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူက“ ငါဟာအမြဲတမ်းတကယ့်ကိုစွဲလမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမထင်ဘူး။ "ဒါပေမယ့်ငါကအရမ်းနည်းနည်းသုံးခဲ့ကြပြီးငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကပြုမိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရည်းစားက၎င်းကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့သောအရာများကိုမသုံးခဲ့ပါ၊ သို့သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ဆက်နွယ်မှုများတွင်ဤထပ်ခါတလဲလဲပြhaveနာဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည် - ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိုချင်သည့်ပျားရည်ဆမ်းခရီးအလွန်လျှင်မြန်စွာဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်မရနိုင်ပါ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ခက်ခဲ။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာဟာငါ့ကိုပိုပြီးနက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်မှာပျင်းစေခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။
ထိုပျင်းစရာကောင်းခြင်းသည်အထူးသဖြင့်နှစ်ထောင်ချီသော ED အမျိုးအစားကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မိတ်ဖက်သစ်တစ် ဦး ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်“ ပျောက်ကင်းသွားသည်” ဖြစ်သည်။ ယခု 29 Kevin သည် RedTube ပေါ်ရှိ tab အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ခြင်းမှပုံမှန်ပုံမှန်ရရှိသည်ဟူသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ထိုအခါမူကားထိုခံစားမှုလျင်မြန်စွာလျော့ကျသွားသည်နှင့်သူသည်ထိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏နှိုးဆော်မှုကိုမခံရတော့ပါ။ "ငါသုံးနှစ်ကြာငါ့အဟောင်းနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ဖူးသည်။ ငါ porn အတွက်တက်ရနိုင်ပေမယ့်သူမအဘို့။ ငါအမြဲတမ်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါဟာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ။ ”
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကပေးသောအကန့်အသတ်မဲ့သောရွေးချယ်မှုသည်သင်၏“ ပုံမှန်” လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုယိုယွင်းစေနိုင်သည်။ "ဒါဟာဘားလွန်းမြင့်မားသောသတ်မှတ်ထား," နိုက်ကပြောပါတယ်။ တုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်သင်၏ Brain on Porn နှင့် EDdit ဖိုရမ်များကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်ထွက်လာသည်။ သူပတ် ၀ န်းကျင်၌တည်ဆောက်ခဲ့သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများက“ ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု” ဟုခေါ်သောရောဂါ၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခဲ့သည်။
ယခင်အဖွဲ့သည်အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအကြားရှင်းလင်းသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဟုသူကယူဆထားသည့်အရာများကိုအသိပညာမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည် -“ 2006 တွင် porn streaming များပေါ်ပေါက်လာခြင်း မှလွဲ၍ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ငယ်ရွယ်သော ED အတွက်လွန်ခဲ့သော 10-20 နှစ်များအတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ ”
သို့သော်ဤအမြင်သည်ဝေဖန်သူများမပါပါ။ စာရင်းအင်းပညာရှင်များအနေဖြင့်ငြင်းဆန်။ မရသော“ ဖြစ်ရပ်မှန်များ” ကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါ၌ပင်ကောင်းမွန်သောသတိပေးချက်ကိုသတ်မှတ်သည်။ ထိုသံသယများထဲမှတစ်ခုမှာဒေါက်တာ Justin Lehmiller ဖြစ်သည်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင်မကြာခဏသင်ကြားခဲ့သောဆရာဖြစ်ပြီး Kinsey Institute မှသုတေသနလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ သူသည်လိင်နှင့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလူ့လိင်ဆိုင်ရာအဓိကဂျာနယ်တိုင်းတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Lehmiller ၏ရည်မှန်းချက်မှာရေများများလွန်း။ ရေများများသောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ တချို့လူတွေကအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်နေတယ်။ “ ကျနော့်မှာခိုင်မာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်မရှိပါ။ ငါသိပ္ပံပညာရှင်ပါ။ ငါ၌ရှိသည်အယူအဆပိုဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသူတွေမှာပိုများများလာတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေပိုများလာတယ်၊ လိင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေပိုများလာတယ်။ porn တစ်ခုတည်းကိုအပြစ်တင်ခြင်းသည်အယူအဆဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Moyle ကသံယောင်လိုက်သောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှာတရားဝင်မှုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောပြographyနာကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမဟုတ်ဘူး။ ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအစီရင်ခံစာများသည်အချိန်တိုင်းမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြundနာများကိုမဆွေးနွေးရသေးပါ။ ယင်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဲဒါဟာကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုသံသရာတစ်ခုပါပဲ။ ”
ထိုအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုသံသရာသည်လူများစွာကိုနက်မှောင်သောဝဘ်ဆိုက်နှင့်ဆေးဝါးအတုများမှ Viagra ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်လူများစွာအားအင်တာနက်နောက်ကျောလမ်းကြားများသို့ ဦး တည်စေခဲ့သည်။ ရှက်ကြောက်ခြင်းသည်သတိကြီးစွာထားပုံရသည်။
တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း UP IS
ဤကဲ့သို့သောနေရာများမှများစွာသောများကဲ့သို့သောလူသစ်များသည်လှုပ်ရှားမှု၌ပါ ၀ င်နိုင်ကြသည်။ ၎င်းသည်နှစ်ထောင်ချီသောပြtoနာအတွက်အနှစ်တစ်ထောင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီးခေတ်မီနည်းပညာသည်တရားမ ၀ င်လမ်းကြောင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည် - သမ္မာသတိ၊ နောက်တစ်နေ့တွင်ပေးပို့ခြင်း - ဆေးရုံ၏လုံခြုံမှုနှင့်တရားဝင်မှုနှင့် 24 /7- သည်ဆေးဆိုင်ဖြစ်သည်။
Lehmiller အပါအ ၀ င်ကျွမ်းကျင်သူအချို့က၎င်းဆေးများကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီခြင်းသည်မူလကပင်အထောက်အကူမပြုနိုင်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ပြourနာများ၏အကြောင်းရင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမည့်အစားဆေးပြားကိုရှာဖွေရန်သွေးဆောင်မှုကိုတိုးစေသည်။ သို့သျောလညျးကိုဒီမှာလက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်တစ်ဒီဂရီရှိပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကမမှန်ပါ။ အမျိုးသားများသည်နေ့တိုင်းစည်းကမ်းမဲ့ဆေးများဝယ်ယူခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေပါသည်။ သူတို့ပြောတာကြောင့်သူတို့အားလုံးဟာရုတ်တရက်ဆရာဝန်ဆီကိုပြေးသွားမှာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ တကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီတော့ဒီလှိုင်းသစ်စတင်မှုအသစ်ဟာ John လိုလူတွေအတွက်အနည်းဆုံးရေတိုမှာအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်မလား။ “ ကျွန်တော့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးကတော့ဒီပုံကြီးချဲ့တဲ့လက်ခံမှုပဲ။ ဆရာဝန်နဲ့စကားပြောပြီးလာပြောပါ '' ဟုဂျွန်ကပြောသည်။ "ဒါဟာတကယ်ကိုမိုက်မဲတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲထုတ်ဖို့ပိုလွယ်လာရင်ငါထိုင်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ ” သူသည် 50-100 ၏ဒေသတွင်းရှိသူ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ED ဆေးများကိုတရားမဝင်ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုဂျွန်ကခန့်မှန်းသည်။ တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမတိကျသည့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ အဆိပ်နှင့်အဆိပ်အတောက်များ၊ ဆေးအတုများကြောင့်အန္တရာယ်များအကြောင်းသိသလားဟုမေးသောအခါသူကကျည်ဆံများကိုချွေးထွက်စေသည်။ "မဟုတ်ဘူး" ဟုသူကဆိုသည်။ “ အဲဒါကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး”
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ များစွာသောကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကောင်းကျိုးများစွာပြုလုပ်ရန်အလားအလာရှိသည်။ “ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ၀ ယ်ရတာပိုလွယ်ကူတာပေါ့။ “ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုနားလည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရောင်းတာကိုစည်းကမ်းလိုက်နာတယ်။ ဒီစကားပြောဆိုမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖို့လည်းကျနော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
“ အမျိုးသားတွေကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကိုအခါအားလျော်စွာမရနိုင်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ငါတို့ကဒီလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှဆေးမထိုးဘူး၊ ငါတို့ရဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကသူတို့ကို ၀ ယ်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးသူတွေကိုသာခွင့်ပြုပါတယ်။ ”
ငါတို့လိုချင်တာကအားလုံးလိုချင်တာက "ED or ED" လို binary အမျိုးအစားအသစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ Lehmiller က“ လူငယ်တွေက ED ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမှားယွင်းတဲ့အကြံဥာဏ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ “ လိင်တံကသူတို့လိုချင်တာကိုအချိန်တိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြaနာရှိတယ်ထင်တယ်။ သို့သော်အမျိုးသားများအနေဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စိုက်ထူခြင်းကိုပုံမှန်မပြုလုပ်သင့်ပါ။
တစ်နည်းပြောရရင်ဘဝပဲ။ “ တစ်ခါတလေဘဝကခက်ခဲတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်၊ သင်ပင်ပန်းနေပြီ၊ အားကစားရုံကိုမသွားနိုင်ဘူး” ဟုနိုက်တ်ကဆိုသည်။ “ မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့်ကုထုံးမျှမကထိုအရာအားလုံးကိုပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သည်။
သူမကဆေး၏အကျိုးကျေးဇူးကိုသူမြင်သည့်နေရာသည်အတ္တအတွက် Viagra ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ “ ငါကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးသူ့ကိုတစ်ပြား၊ နှစ်လုံးပေးရမယ်။ ဒါပဲ။ သင့်မှာတစ်ချိန်ကရှိတယ်၊ ပြီးတော့ဒါကသင့်ခေါင်းပေါ်မှာကပ်နေတယ်။ Viagra နှင့်စန်းအပေါ်အကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲ! မင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပြန်ရပြီ
ကျန်းမာသောအမျိုးသားများကြားတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်စိတ်ထဲတွင်ရှိပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြissuesနာများ၏နောက်ထပ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာမလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ အဲဒီမှာတောတွင်းရှိတယ်။
“ ဒီအရာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့စပြီးစပြောကြတယ်။ လိင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မရောက်သေးပါ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောထားကအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာကိုပေးတယ် - အရှုပ်အထွေးကိုဖြိုခွဲရန်၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစိန်ခေါ်ရမယ်။ ပြီးတော့ငါတို့လုပ်သည်အထိ? စာရင်းဇယားများအရအိပ်ခန်းရဲ့ကျဆင်းမှုကသာဆက်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကူညီရန်မည်သည့် tablet များကိုသင်သောက်သင့်သနည်း။
ဆေးကုသမှုတွင်မည်သည့်အရာကမျှအရှက်ကွဲစရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်မည်သည့်အရာကိုယူနေသည်ကိုသင်လိုအပ်သည်။ အတော်များများရဲ့ဆေးဝါး Umar Malick, ဆေးပြားအပေါ်ဖိတ်
1 ။ VIAGRA
Pfizer မှထုတ်လုပ်ခဲ့သောမူလဆေးဝါး။ ၎င်းသည်လိင်တံသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေပြီး 30 မိနစ်အတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသင့်သည်။
Sildenafil citrate သည် Viagra တွင်ပါဝင်သောအရာဖြစ်သည်။ တံဆိပ်မတပ်ထားသောမျိုးကွဲများသည်တူညီသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သော်လည်း Viagra ၏စျေးနှုန်းကိုမထမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
Viagra ၏အဓိကပြိုင်ဆိုင်မှု၏အမှတ်တံဆိပ်။ ၎င်းသည် 36 နာရီအထိကြာရှည်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအပြောအားဖြင့်“ တနင်္ဂနွေဆေးလုံး” ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်ဆိုရကြောင်းကိုရှင်းပြသည်။
အမှတ်တံဆိပ် Cialis ။ ၎င်းသည်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းစျေးနှုန်းတစ်ဝက်ကုန်ကျသည်။ အချို့သောယောက်ျားများသည် tadalafil တွင် sildenafi ထက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။
Viagra ထက်အနည်းငယ်ပိုမြန်အလုပ်လုပ်ပြီးငါးနာရီအထိကြာသည်။ သတိပြုရမည်မှာဤဆေးသည် Viagra ထက်နည်းသောဆေးများသာဖြစ်သည်။
Levitra အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း။ အစားအစာကြောင့်လည်းထိခိုက်မှုနည်းသည်။ Viagra အစားအစာများက Viagra သွေးကြောထဲဝင်ရန်အခက်တွေ့စေသည်။
အဲလက်စ်သည်ဆုရစာရေးဆရာနှင့်အယ်ဒီတာများဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်စီမံကိန်းအားလုံး၏ကဏ္aspectsများမှအသံ၊ အထောက်အထားများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအထိနှစ်ရှည်လများဂျာနယ်လစ်နှင့်ဆောင်းပါးရှင်၏အင်္ဂါရပ်များဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။